BD vs IN --==-- Cyber War[Whole Story] | Shwekoyantaw
Published : 10:02 PM Author : shwekoyantaw
ကျွန်တော်တို့ အရင်တုန်းက ရေပိုင်နက် အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Bangladesh ကို Operation တစ်ခုဆင်နွဲခဲ့တာ အားလုံးလည်း မှတ်မိကြဦးမှာပါ.....ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်....အဲတုန်းက ချ ဆိုလို့သာ ၀ိုင်းချကြတယ်... Bangladesh ဘာလဲ ဆိုတာ ရေရေရာရာ မသိခဲ့ကြတဲ့လူက များမှာပါ.....
ကျွန်တော်ထင်နေပါတယ်.....တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တော့ BD တွေနဲ့ တစ်ပွဲတစ်လမ်းတော့ ထပ်ဆွဲရဦးမယ် လို့.....ဘယ်တော့လဲ သာ ပြောလို့မရတာ....
ခုပြည်တွင်းမှာလည်း BD အနွယ်ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ကုလားတွေ နဲ့လည်း အခြေအနေတွေ ရှုပ်ထွေးနေတော..... ????
စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ ရန်သူအကြောင်းကြိုသိထားခြင်းသည်လည်း စစ်ပွဲအောင်နိူင်ရာ အထောက်အကူပါပဲ...ကဲ...နာမည်ကျော် Cyber War တစ်ခုဖြစ်တဲ့ BD vs IN Cyber War ကို ဒီ စာအုပ်လေးကနေတစ်ဆင့် လေ့လာကြည့်ရအောင်ဗျာ...
ရန်သူပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အတုယူစရာရှိရင် အတုယူရပါမယ်....ဟုတ်တယ်နော်....ခု ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ...
ဘာကြောင့် Cyber War စဖြစ်ခဲ့ရသလဲ ...
BCA / 3xp1re / BBHH နဲ့ ICA / Indishell အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်ပုံ ..... DDos ကိုလည်း လက်နက်တစ်ခုလို အကြီးအကျယ် သုံးစွဲခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ...
ဒီ Cyber War ကာလအတွင်းမှာ BCA က သူတို့ Bangladesh Website တွေကို သူတို့ရဲ့ web security တိုးမြင့်မို့အတွက် အသိပေးချက် အသိပေးပုံလေး ကိုလည်း ဖတ်ရှုကြရမှာပါ ...[ကဲ...မြန်မာတွေကော ... ဘယ်လိုလဲ ...]
BCA ဘာကောင်လဲ ဆိုတာ သေချာကြည့်နော်.... ဖြစ်ပြီ ဆိုတော့မှ Tuto တွေပြေးရှာနေလို့ကတော့ မဖြစ်သေး........
ခု ဒီစာအုပ်က Bangladesh ဖက် ပင်းတဲ့ Security-ray က ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော် နောက်ကိုလည်း BD တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တယ် ထင်တာလေးတွေကိုလည်း စုစည်းတင်ပြပေးသွားပါ့မယ်....
ထလော့ ... အို မြန်မာ ...
Labels: ebook, other |